के गर्न सक्छन् प्रचण्डले ? त्यसपछि देउवा र अरु लाइन लागेर बसेका भोकाप्यासाहरुले ? « News24 : Premium News Channel
के गर्न सक्छन् प्रचण्डले ? त्यसपछि देउवा र अरु लाइन लागेर बसेका भोकाप्यासाहरुले ?
कस्तो ‘भद्दामजाक’ गरेको देश र जनतामाथि ??? कति अस्थिर बनाएर ‘गिजोलिंदैछ नेपाल आमाको छाति ???’ को हो पर्दापछाडिको खेलाडि ??? कस्को ‘मतियार’ भएर देशलाई ‘भासमा डुबाउने’ र हाम्रो भविष्य ‘कत्लेआम’ गर्ने काम भइरहेको छ यहाँ ???
०४७ सालयताको २६ वर्षमा २४ पटक सरकार फेरियो, २५ औं पटक सरकार फेर्ने धन्दा चलेको छ । अब बन्ने सरकार पनि नौ महिनाको रे ! के गर्न सक्छन् प्रचण्डले ? त्यसपछि देउवा र अरु लाइन लागेर बसेका भोकाप्यासाहरुले ? यस्तै व्यवस्थाको दासी भएर बस्ने हो भने अबको १० वर्षसम्म यो देशमा कोको प्रधानमन्त्री हुन्छन्, अहिले नै भित्तामा सबैको फोटो झुण्ड्याएर बसे हुन्छ ! यस्तो देशमा कस्तो भविष्यको चित्र कोरेर बस्नू ???
केपी ओलीको भक्त भएर बोलेको होइन ‘राम्रोलाई राम्रो र गलतलाई गलत’ भन्नसक्ने मुटु छ मसँग । लोभलालचहीन भएर देशका सारा मानिसहरुलाई समृद्धि नै सुम्पिन नभ्याए पनि समृद्धिप्रतिको ‘भाइब्रेसन’ त दिएका थिए, गर्नै दिंदैनन् त ??? ‘देशको भलो चाहनेको कहिल्यै जय नहोस’ झैं फेरि एउटा पात्रको उज्यालोलाई परास्त गरेर अँध्यारोमा मजाक गरिरहेछन् रिमोट कन्ट्रोलको स्विचमा उघ्रिएकाहरु !! जस्लाई हामीले यसअघि नै भोगिसकेका र झेलिसकेका छौं । यसाधारमा सत्य निर्मम् छ, न संविधान कार्यान्वयन, न संघीयता, न समयमै निर्वाचनहरु, न समृद्धि न त स्थीरता ! खाली, बिल्लीबाठको मैदानमा छाति पिटीपिटी बिचरा हामी : जिन्दगीको ‘नास’ गरिरहेछौं !!